Akụkọ - Ntuziaka maka ịrụ ọrụ na nchekwa nke aminoguanidine bicarbonate
Ntuziaka maka ịrụ ọrụ na nchekwa nke aminoguanidine bicarbonate
Aminoguanidine bicarbonate bụ kemịkal na-egbu egbu, yabụ na ọ nwere ihe pụrụ iche chọrọ na nchekwa nkịtị. Ọ dị mkpa ịchekwa ha iji hụ nchekwa nke ngwaahịa na ndị ọrụ. Ndị a bụ ụfọdụ nlekọta nchekwa ị kwesịrị ịmara.
1. A ghaghị ịchekwa ya na ebe dị jụụ na ikuku, n'ihi na aminoguanidine bicarbonate na-ejighị n'aka mgbe ọ na-ekpo ọkụ. Ozugbo ọnọdụ okpomọkụ dị elu karịa 50 ℃, ọ ga-amalite ire ere, nke ga-emetụta arụmọrụ ojiji ya. Ya mere, attentionaa ntị ijikwa okpomọkụ na iru mmiri nke ụlọ nkwakọba ihe.
2. Aminoguanidine bicarbonate bụ nsi. Ekwesiri ịchekwa ya n'ụlọ nkwakọba ihe pụrụ iche nke nwere akara ịdọ aka ná ntị nchekwa, nke ndị mmadụ na-enweghị ike iji mee ihe.
3. Mee ezigbo ọrụ na njikwa kwa ụbọchị, were ma jiri aminoguanidine bicarbonate ga-echekwa ya na ndekọ dị mma, iji gbochie ihe ga-efu ma ọ bụ jiri ya mee ihe n'ụzọ na-enweghị isi.
Ya mere, n'oge nchekwa nke aminoguanidine bicarbonate, a ghaghị ịkwụ ụgwọ ihe ndị dị n'elu karịa ka ha wee hụ nchekwa ahụ.
Aminoguanidine bicarbonate kwesịrị ịkwụ ụgwọ pụrụ iche na usoro ojiji, n'ihi na ọ bụ kemịkal na-egbu egbu. Ojiji ziri ezi nwere ike hụ na nchekwa nke ndị ọrụ. Nke a bụ ihe ọrụ nchekwa ole na ole ị kwesịrị ịmara tupu iji aminoguanidine bicarbonate.
1. Mgbe ị na-eji aminoguanidine bicarbonate, ndị na-arụ ọrụ kwesịrị ị attentiona ntị na nchebe nchekwa. Zere kọntaktị kpọmkwem nke aminoguanidine bicarbonate na anya na anụ ahụ, ma ọ bụghị na ọ ga-ebute oke ahụ na ahụ.
2. Lezienụ anya na mgbochi mgbochi mmiri na mgbochi mgbochi, ma lebara anya pụrụ iche ka ị ghara ikwe aminoguanidine bicarbonate n'ime nsị ahụ, ma ọ bụghị na ọ ga-emerụ isi iyi mmiri.
3. Tupu na mgbe ojiji nke aminoguanidine bicarbonate, jiri aka ndị ejiri mee ihe nke ọma. Mụ anụmanụ kwesịrị ilebara disinfection anya.
N'okwu, ojiji nke aminoguanidine bicarbonate dị ezigbo mkpa. Naanị mgbe ejiri ya rụọ ọrụ nke ọma ọ nwere ike ịdị mma.
Post oge: Ọgọstụ-08-2020